मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मिर्गौला प्रत्यारोपणबाहेक अरु सेवा सुचारू – Health Post Nepal
२०७७ भदौ २५ गते १६:१९
भारतबाट एउटै बसमा आएका अर्घाखाँचीका ३० जनामा कोरोना संक्रमण
धेरैजसो अस्पतालहरूमा बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा धेरै अस्पतालहरूका सेवाहरू बन्द भइरहेका छन्। भक्तपुरको दूधपाटीमा अवस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले भने मिर्गौला प्रत्यारोपणबाहेक अरू सबै सेवा सुचारू गर्दै आएको छ।
वागमती प्रदेशमा तीनवटा अंग प्रत्यारोपणका अस्पताल छन्। त्यसमध्ये भक्तपुरको दूधपाटी रहेको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र एक हो।
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख डा. प्रेमराज ज्ञवालीले मिर्गौला प्रत्यारोपणबाहेक अरू सबै सेवा सुचारू भइरहेको जानकारी गराए।
हेमोडायलासिस, डायलासिस, ओपिडी, मुटु सेवा, कलेजो र रेडियोलोजीलगायत सबै सुचारू छन्।
उनका अनुसार लकडाउनका कारण पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै कम बिरामीहरू आउने गरेका छन्।
उनले पहिला दैनिक ४ देखि ५ सय बिरामी आउने गर्नेमा अहिले त्यो संख्या घटेर ४०–५० बिरामीमात्र रहेको बताए।
बाहिरबाट आउने सवारीसाधन नलचेका कारण अहिले उपत्यकाभित्रका बिरामीमात्र आइरहेको डा. ज्ञवालीले बताए।
अहिले बिरामीहरू नआउनु मुख्य कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको उनले ठम्याइ छ। साथै कोरोनाकै कारण उपत्यका बाहिरका बिरामी चाहेर पनि उपचार गर्न आउन पाएका छैनन्। उनले प्रस्ट्याए भने, ‘बाहिरी जिल्लाबाट आउन सार्वजनिक यातायात छैन, उपत्यका छिर्न पास चाहिने, पिसिआर रिपोर्ट चाहिने जस्ता धेरै समस्याका कारण बिरामीहरू आउन नसकेका हुन्।’
‘अर्कोतर्फ हामीहरूले पनि सिकिस्त छैन, नर्मल छ भने अस्पताल नआउँदा हुन्छ भनिरहेका छौं,’ उनले भने।
पूर्वबाट अंगप्रत्यारोपण र मुटु रोगका बिरामीहरू धेरै यहीं आउने गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार अहिले मुटु रोगको सेवा सुचारू गरेको १० दिन भइसकेको छ।
कोही मुटुको अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामी आए आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको उनले जनाए।
मिर्गौलाका बिरामीहरूलाई भने अहिले धेरै समस्या भइरहेको उनको अनुभव छ। अहिले बिरामीहरूले डायलासिस गरेर बसेका छन्। मिर्गौला प्रत्यारोपण नभएसम्म उनीहरूले हप्तामा कम्तीमा पनि दुईपल्ट डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले पनि दिनमा १०० जनासम्मले डायलासिस सेवा लिँदै आएको उनी बताउँछन्। डायलासिसका ५०० जना पर्खाइमा बसिरहेको डा. ज्ञवालीले बताए।
उनले भने, ‘मिर्गौलाका बिरामीका लागि यति सानो अस्पतालमा ठाउँ पुगिराखेको छैन। उनीहरूको समस्या समाधान गर्न मेसिन, जनशक्ति र भौतिक संरचना (बिरामी राख्ने ठाउँ) आवश्यक छ। यी तीन चिजमा कुनै एउटा भएन काम हुँदैन।’
यसको समाधानका उपाय भनेको सबै बिरामीलाई प्रत्यारोपण गर्न नलगाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन्। त्यस्ता बिरामीहरूलाई प्रत्यारोपण नगरी कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
यो अपस्तालमा अहिले बिहान ओपिडी सेवा ९ः३० देखि सुचारू हुने गरेको छ।